Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Depression (3) စိတ်ကျခြင်း
Depression (3) စိတ်ကျခြင်း
ကျနော့် အသက်က (၃၆)နှစ်၊ (့) မှာနေပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်က စာရင်းကိုင်တဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ စိတ်အလိုမကျတာ၊ စိတ်ထိခိုက်လွယ်တာ၊ ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာ လွယ်တယ်၊ စိုးရိမ်စိတ်များတယ်၊ တစ်ခါတစ်ခါ ကြောက်စိတ်လည်း ဝင်ပါတယ်၊ လူမှုရေး ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ လူအများကြားထဲကို သွားရမှာလည်း ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလို နဲ့ စိုးရိမ်းစိတ် များပြီးတော့ မသွားဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်း များပါတယ်။
အိမ်မှာ တစ်ကိုယ်တည်း ဆိပ်ဆိပ်နေတာ များပါတယ်။ လူကလည်း ဝေဝါးထိုင်းမှိုင်းပြီးတော့ လမ်းပျောက်နေသလို ပန်းတိုင် ပျောက်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ ခေါင်း မကြာခန ကိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက် တခြမ်း ကိုက်တာများပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုခုကို အာရုံစူးစိုက်လို့ မရပါဘူး။ စာတွေ ဖတ်လည်း ရှေ့ကဖတ်သွားရင် နောက်က အားလုံးပြန်မေ့ပါတယ်။ မှတ်သားလို့လည်း မရပါဘူး။ သင်တန်းတခု တက်တယ် ဆိုရင်လည်း သင်တန်းပြီးသွားရင် ဘာမှမသိလိုက်သလို၊ သင်တန်းချိန်မှာ အာရုံစိုက်လို့ မရပါဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ မိသားစု ကိုလည်း အသေးအမွှား ကိစ္စလေးတွေကို အကျယ်ချဲ့ပြီး ရန်လုပ်တတ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာလည်း အသိစိတ်က ဝင်သွားပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေလည်း မဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ စိတ်ခံစားချက်ကလည်း အရမ်းလွယ်တယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို စိတ်ဆိုးတာတို့ စိတ်ခုတာတို့ စိတ်ကောက်တာတို့ မကြာခန ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်တက်ကြွလည်း ခနပါပဲ၊ ပြီးရင် စိတ်ပြန်ကျသွားတတ်ပါတယ်။ စိတ် အပြောင်းအလဲလည်း မြန်ပါတယ်။ အစားအသောက်တွေလည်း ပုံမှန်မစားဖြစ်တာ များပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ တနှစ်တခါ ဆေးစစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတရံ ပန်းနာရင်ကျပ်ဖြစ်တာက ကလွဲလို့ ထွေထွေထူးထူး ရောဂါတော့ မရှိပါဘူး။ ဆေးလိပ်တို့ ကွမ်းယာတို မစားမသောက်ပါဘူး။ အရက်ကတော့ လူမှုရေးအရ တစ်ခါတရံ ကော်ဖီခွက်လောက်ရှိတဲ့ ခွက်နဲ့ တခွက်စ နှစ်ခွက်စ လောက်ပဲ သောက်ဖြစ်ပါတယ်။ မသောက်လည်း နေနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဖီလည်း အရမ်းမကြိုက်ပါ။ အားကစား ကတော့ စက်ဘီးစီးတာတို့ လမ်းလျှောက်တာတို့ လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တပတ်ကို နှစ်ခါ သုံးခါလောက် လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်နေတာ ၄-၅ နှစ်လောက် ရှိပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုနှစ်လောက်က အမေရိကန်လူမျိုး စိတ်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကို ပြဖူးပါတယ်။ ဆရာဝန်က မိနစ် ၃ဝ စကားထိုင်ပြောရင်းနဲ့ မေးခွန်းတွေဘာတွေ လျှောက်မေးပါတယ်။ ပြီးတော့ စိတ်က ပုံမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ ဘာဆေးမှလဲမပေး၊ ဘာမှလဲ မပြောဘဲနဲ့ ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက သူငယ်ချင်း အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်က လိုက်ပို့တာပါ။ အိပ်လို့လည်း ပျော်ပါတယ်။ အထူသဖြင့်တော့ လိင်မှုကိစ္စတွေ လုပ်ရင်တော့ ပုံမှန် အိပ်ပျော်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အရမ်းစဉ်းစားတာ များရင်လည်း အိပ်မပျော်ပါဘူး။ ငယ်ငယ် တုန်းကတော့ အရမ်း ကစားလွန်းလို့ ခေါင်းမကြာခန ထိခိုက်တာတော့ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ၁၉၉၉-၂ဝဝဝ ဝန်းကျင် လောက်ကဆိုရင် ငှက်ဖျားဒဏ်ကို မကြာခန အလူးအလဲ ခံရဖူးပါတယ်။ ငှက်ဖျားဆေး ပြင်းပြင်းတွေ မကြာခန သောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဦးခေါင်းတော့ ဆေးမစစ်ဖူးသေးပါဘူး။ လည်းပင်ကြီး ဟော်မုန်းလည်း မစစ်ဖူးသေးပါဘူး။ သွေးခုန်နှုန်းက တမိနစ်ကို ၈၈-၈၉ ချက်လောက် ခုန်ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိတော့ ဒီရောဂါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဘာဆေးမှ မသောက်ဖူးသေးပါဘူး။
လူတယောက်ဟာ Mood စိတ်မူ ကျနေပြီး လုပ်တိုင်ကိုင်တာမှာလဲ ကိုယ်တိုင် အားမရဖြစ်နေလို့၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ အမူအယာ၊ ခံစားချက်နဲ့ နေကာင်းထိုင်သာ ရှိမှုတွေကိုပါ ထိခိုက်လာတာကို Depression စိတ်ကျခြင်းလို့ ခေါ်တယ်။
၂ဝ၁ဝ အမေရိကန်မှာ ၂ဝဝ၆-၁ဝဝ၈ အတွင်း လုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတခုအရ ၉% မှာ စိတ်ကျအဆင့်နဲ့ ၃့၎% မှာ ဆိုးဝါးတဲ့အဆင့် ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ၈% နဲ့ ကလေးတွေမှာ၂% ဖြစ်တယ်။ အနုပညာသည်တွေ ဥပမာ နာမည်ကျော် ပန်းချီဆရာ Vincent van Gogh ဖြစ်တဲ့ Bipolar disorder ရှိသူတွေမှာလဲ ဒီလိုမျိုး ရှိတယ်။ ခရစ်ယန် (ဘိုင်ဘယ်) ထဲက ဒေးဗစ် ဘုရင်ကြီးလဲ ခံစားရတယ်လို့ ဆိုထားတယ်။
တချိန်တုံးက သာယာ ပျော်ရွှင်တာမျိုးကို အခု စိတ်ဝင်စားမှု လျှော့လာမယ်။ အာရုံစိုက်ဘို့ ခက်မယ်။ အသေးစိတ်တွေ မမှတ်နိုင်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့ပါ ခက်လာမယ်။ ဆိုးလာရင် သတ်သေချင်စိတ် ဝင်တတ်သေးတယ်။ အိပ်မပျော်သူက မပျော်၊ အအိပ် များသူကများ၊ အားအင်ကုန်နေ၊ အစာခြေတာ မကောင်း၊ ဗိုက်အောင့်စတာတွေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
စိတ်ရောဂါ မဟုတ်ဘဲလဲ စိတ်ကျတာမျိုး ဖြစ်သေးတယ်။ Mononucleosis ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်တာ၊ လည်ပင်းကြီး ဟော်မုန်း နည်းရောဂါ ဖြစ်ခါစ။ ရုပ်ပိုင်း မကျန်းမာတာ၊ မျိုးဗီဇ၊ ဟော်မုန်း၊ ဆေးဝါး၊ အသက်၊ ဦးနှောက်ခိုက်မိတာ၊ ရာသီဥတု နဲ့ လူမှုဝန်းကျင်တွေကြောင့် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေ လက်ခံကြတဲ့ ကံ-စိတ်-ဥတု-အာဟာရ ဆိုတာကို သက်သေ ပြရာ ရောက်နေတယ်။
အမျိုးခွဲ (၃) ခုရှိတယ်။
1. Major depression အဓိက-စိတ်ကျရောဂါ၊ လက္ခဏာတွေ ဆက်တိုက် ၇ ရက် ၂ ပါတ်ဆက်ဖြစ်တယ်။
2. Dysthymia သိပ်တော့ မဆိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ကြာတတ်တယ်။ အဓိကအမျိုးအစားကို ပြောင်းသွားနိုင်တယ်။
3. Bipolar disorder (Manic depression) ရှားတယ်။ ဖြစ်တတ်တာမျိုးတွေ ထပ်ဖြစ်တယ်။ Mania လာလိုက်၊ Depression လာလိုက်ဖြစ်တယ်။ နာတာရှည်တယ်။
Depressed cycle မှာ လက္ခဏာတွေ အားလုံးလိုလို ဖြစ်မယ်။ Manic cycle မှာ တွေးတာ၊ ဆုံးဖြတ်တာ၊ လူမှုရေး လုပ်တာမှာ ပြဿနာ ပေါ်တတ်တယ်။ ဥပမာ မလုပ်သင့်တဲ့ စီးပွါးရေးလုပ်မယ်။ မဖြစ်သင့်တဲ့ လိင်ကိစ္စ လုပ်မယ်။
အပြင်း-အပြော့ မတူကြဘူး။ တောက်လျှောက် စိတ်ဝမ်းနဲ၊ စိုးရိမ်၊ စိတ်ဆိုး၊ စိတ်တို၊ ဗလာဟင်းလင်း ဘာမှ မရှိသလိုခံစား၊ မျှော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့၊ အနုတ်သဘောသာမြင်၊ တန်ဘိုးမရှိဘူးထင်၊ ကူမဲ့သူကင်းမဲ့တယ်ထင်၊ အပြစ်ရှိနေတယ်ထင်၊ တချိန်က ဝါသနာပါခဲ့တာ၊ လိင်စိတ်အပါအဝင် ပျော်စရာမှန်သမျှ စိတ်မပါ၊ လူတောမတိုးချင်၊ မိသားစုထဲမှာလဲ ကင်ကင်း နေချင်၊ အိပ်မရ၊ မနက်အစောကြီးနိုး၊ တချို့မှာ အအိပ်ကြီး၊ စားချင်သောက်ချင်စိတ်နည်း၊ လူကပိန်လာ၊ တချို့ အစားများ၊ လူကဝလာ၊ အားယုတ်၊ ခွန်အားမစိုက်နိုင်၊ လုပ်ရင်လဲ နှေးကွေး၊ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း၊ သေတာ-သတ်သေချင်တာတွေး၊ သတ်သေဘို့ ကြိုးစား၊ ဂနာမငြိမ်၊ မတည်မငြိမ်၊ အာရုံစိုက်မရ၊ မှတ်သားမရ၊ ဆုံးဖြတ်မရ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အစာမကျေတာ၊ နာကျင်နေတာတွေ ဆေးမတိုး။
မသင့်တော်ဘဲ စိတ်တက်ကြွနေ၊ မသင့်တော်ဘဲ စိတ်တို-ဒေါသထွက်၊ အိပ်မရတာကြာ၊ အ်ိပ်စရာ မလိုသလိုဖြစ်၊ အစစ် မဟုတ်ဘဲ စွမ်းအားတွေ၊ အရေပါတာတွေ ရှိ-ဖြစ်နေသလိုထင်၊ စကားတွေ လိုတာထက် ပိုပြော၊ ပြောတာလဲ ကျယ်ကျယ် လောင်လောင်၊ တောင်စဉ်ရေမရ၊ တွေးတာတွေ မြန်လွန်းနေ၊ လိင်စိတ်တွေ လွန်ကဲနေ၊ ခွန်အားတွေ တိုးလွန်းနေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ခပ်ညံ့ညံ့တွေချနေ၊ လူတော-သူတောမှာ မဖွယ်မရာဖြစ်နေ။
• ယောက်ျားတွေမှာ ဖြစ်ရင် အားအင်နည်း၊ စိတ်တို၊ ဒေါသကြီး၊ သူများအပြစ်ရှာနေ၊ အလုပ်မှာ အာရုံစိုက်မရ၊ အအိပ်ပျက်၊ ဆေး-အရက်ကို မှီခိုချင်၊ သတ်သေချင်စိတ်က ၄ ဆပို၊ ဆေးမကုသူ ပိုများ၊
• အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်ရင် အသက်ငယ်စဉ်ဖြစ်၊ ပိုကြာတတ်၊ ပြန်ဖြစ်တတ်၊ ရာသီဥတုလိုက်ဖြစ်၊ လက္ခဏာ အဆန်းမျိုးဖြစ်၊ ဥပမာ အစာများများ စားချင်၊ လူကဝလာ၊ အချိုကြိုက်၊ ညနေပိုင်း ပိုဆိုး၊ အစားဒုက္ခပို၊ စိုးရိမ်စိတ်ကဲ၊ မှီခိုတာများ။ သွေးမဆုံးမီ-ကာလ တာရှည်။ တချို့မှာ ၁ဝ နှစ်ကြာ။
• ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာ ဖြစ်ရင် စိတ်တို၊ လူငယ် လှုတ်ရှားမှုတွေကို စိတ်မဝင်စား၊ ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းလဲ၊ ဝက်ခြံပိုပေါက်၊ မူးယစ်ဆေးသုံး၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှုကို သိပ်မစဉ်းစား၊ သတ်သေချင်တာ ပိုကဲ၊
• Postpartum depression ကလေးဖွါးပြီးဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါ။ မွေးမွေးချင်း ငိုလဲမငို၊ အသက်လဲ မရှူတဲ့ ကလေးကို Blue baby ခေါ်တာနဲ့ ဆက်ပြီး၊ ကလေးမွေးပြီး ၂ ပါတ်အတွင်းလောက် မအေမှာ ဝမ်းသာလိုက်၊ ဝမ်းနဲလိုက် ဖြစ်တာကို Baby blue ခေါ်တယ်။ ဖြစ်လဲခဏပါ။ တချို့ကြ မွေးပြီးနဲနဲကြာမှ သားဦး ဟုတ်ဟုတ်-မဟုတ်ဟုတ် အဲလိုဖြစ်တယ်။ တချို့က ၃ လအတွင်း နဲနဲပိုဆိုးတာ ဖြစ်တယ်။ မရှိတဲ့ အသံ-ရုပ် ကြားတာ-မြင်တာလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
• အမျိုးထဲ တယောက်မက ဖြစ်တတ်ပေမဲ့ မျိုးရိုးလိုက်တယ်လို့ ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါ။ သွေးကျဆေး၊ ကင်ဆာဆေး၊ အတက်ရပ်ဆေး၊ အပြင်းအထံ အနာသက်သာဆေး၊ ကိုယ်ဝန်တားဆေး၊ အရက်ဖြတ်ဆေး တွေကလဲ ဖြစ်စေတတ်တယ်။ အလိုလိုစိုးရိမ်စိတ်ကဲသူ၊ (ADHD) အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းရောဂါ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲသူ၊ တချို့ Schizophrenia ရှိသူမွေးရာပါ အင်္ဂါချို့ယွင်းသူတွေမှာ ဖြစ်တာ လာတွေ့ရသေးတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ၂ ဆဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းတော့ ရှာမရပါ။
ကုသနည်း (၃) နည်း
1. Antidepressant medications ဆေးဝါးနည်း၊
2. Psychotherapies စိတ်နဲ့ကုသနည်း၊
3. Electroconvulsive therapy လျှပ်စစ်နဲ့ကုနည်း၊
• Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ဆေး။ Fluoxetine (Prozac), Paroxetine (Paxil), Sertraline (Zoloft), Citalopram (Celexa), Fluvoxamine (Luvox), Escitalopram (Lexapro) ဆေးတွေက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး နဲတယ်။ ပျို့၊ ဝမ်းပျက်၊ စိတ်တို၊ အိပ်မပျော်တာ နဲ့ ခေါင်းကိုက်တာ လောက်သာ ဖြစ်တယ်။ တချို့မှာတော့ လိင်စိတ်နည်း၊ လိင်စိတ်ပြည့်ဝတာ နှေး-မဖြစ်၊ တချို့လက်တုံတယ်။
• Venlafaxine (Effexor), Duloxetine (Cymbalta) Desvenlafaxine (Pristiq) တွေက သတ္တိ ၂ မျိုးရှိဆေးတွေ။
• Mirtazapine (Remeron) ဆေး၊
• တခြားဟာတွေလဲ ရှိတယ်။ Nefazodone (Serzone), Trazodone (Desyrel), Bupropion (Wellbutrin)
• Lithium (Eskalith, Lithobid), Valproate (Depakene, Depakote), Carbamazepine (Epitol, Tegretol), Lamotrigine (Lamictal) တွေကလဲ စိတ်မူတည်ငြိမ်စေတဲ့၊ အတက်သက်သာဆေးတွေဖြစ်တယ်။
• Certain antipsychotic medications, such as Ziprasidone (Geodon), Risperidone (Risperdal), Quetiapine (Seroquel), Aripiprazole (Abilify), Asenapine (Saphris), Paliperidone (Invega) တခြား စိတ်ဆေးတွေကိုလဲ စိတ်ကျတာကို သုံးနိုင်တယ်။
• Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) ဆေးတွေ။ Phenelzine (Nardil) နဲ့ Tranylcypromine (Parnate)
• Tricyclic antidepressants (TCAs) ဆေးတွေ။ Tricyclic antidepressants are Amitriptyline (Elavil), Protriptyline (Vivactil), Desipramine (Norpramin), Nortriptyline (Aventyl, Pamelor), Imipramine (Tofranil), Trimipramine (Surmontil), Perphenazine (Triavil)
• Tetracyclics ဆေးတွေ။ Maprotiline (Ludiomil) Mirtazapine (Remeron)
• Diazepam (Valium), Alprazolam (Xanax), Lorazepam (Ativan) တွေက စိတ်ကျတာ ကုဘို့တော့ မဟုတ်ပါ။ တခါတလေ တွဲပေးရသေးတယ်။
• Antidepressants ဆေးတွေကို သက်သာလာရင် တဖြးဖြေး လျှော့ပေးတယ်။ ရုတ်တရက် ရပ်မပြစ်ရပါ။
• SSRI ဆေးတွေကြောင့် ကျားရော မပါ လိင်စိတ် နည်းတတ်တယ်။ ယောက်ျားတွေ သုတ်မလွှတ်နိုင်၊ မိန်းမတွေ မပြီးစီးဖြစ်တယ်။ လိုအပ်ရင် ဆေးပမာဏ လျှော့ချပေးမယ်။ Viagra ဆေးပေးတာ သက်သာတာ တွေ့ရတယ်။ တချို့ကို ဆေးအမျိုးအစား ပြောင်းပေတယ်။ Bupropion, Mirtazapine, Duloxetine ဆေးတွေက အဲလို မဖြစ်စေဘူး။ တချို့ကို Buspirone ဆေးပေးတယ်။
Electroconvulsive therapy (ECT) လျှပ်စစ်နဲ့ကုနည်း၊
လျှပ်စစ်ကို ထိန်းပြီး တက်စေအာင် လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ECT နည်းကို ဆေးမတိုးသူတွေ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သူတွေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဘို့ အလားအလာ များနေသူတွေအတွက် လုပ်ပါတယ်။ တချို့ကို ၂ဝ-၉ဝ စက္ကန့်ကြာ လုပ်တယ်။
Psychotherapies စိတ်နဲ့ကုသနည်း၊ နည်းအမျိုးမျိုးသုံးတယ်။ Talking therapies နဲ့ Cognitive/behavioral therapies ရှိတယ်။ ဆိုးတဲ့အဆင့်ရှိသူတွေကို (ECT) လျှပ်စစ်နဲ့ Psychotherapy စိတ်ကုနည်း တွဲလုပ်သင့်တယ်။ အချိန်ယူ ကုသဘို့ လိုတယ်။
စိတ်ကျရောဂါကို အားနည်းလို့ ဖြစ်တာထင်တာ မမှန်ပါ။ အလိုလို ပျောက်သွားမယ် ထင်တာလဲ မှားတယ်။ ပညာတတ်-စာတတ်တွေ မဖြစ်ဘူးထင်တာလဲ လွဲတယ်။ ရုပ်ပိုင်းချို့တဲ့သူတွေလဲ ဖြစ်တာဘဲ။ သတ်သေချင်သူတွေဟာ ထင်ပေါ်အောင် လုပ်တယ်လို့ထင်တာ မဟုတ်ပါ။ တချို့လူမျိုးတွေမှာ မဖြစ်ဘူး ထင်တာ၊ စိတ်ဆေးတွေက စွဲတတ်တယ်ထင်တာ၊ စိတ်ဆေး တခုထဲနဲ့ ရမယ်ထင်တာတွေ မမှန်ပါ။ စိတ်ဆိုပေမဲ့ အာရုံကြော (ဆဲလ်) တွေ ဆက်သွယ်မှုပြုရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ ဦးနှောက်ထဲက Neurotransmitters ဆိုတာတွေ ချို့ယွင်းလာတကြောင့် ဖြစ်တာသိလာရတယ်။
အစားအစာ မျှတ-ပြည့်စအောင် စားပါ။ (ဖေါလစ်အက်စစ်) သောက်ပါ။ အနားယူပါ။ အလားတူ ဖြစ်နေသူတွေနဲ့ တွဲပြီး တိုးတက်လာအောင် ကြိုးစားပါ။ ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးတွေ မချပါနဲ့အုံး။ ခံစားနေရတာတွေကို သူငယ်ချင်း စသူကို ရင်ဖွင့်ပါ။ စာ-ကဗျာ ဖြစ်ဖြစ်ရေးပါ။ မေးတဲ့သူ စာရှည်ရှည်ရေး မေးတာ ကောင်းတယ်။ ဆေးသေခြာကုပါ။ ပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ချထားခဲ့တာကို ပြန်တင်လိုက်ပါ။ မလေးလွန်းပါ။